Hevitra MPANOHARIANA | Febroary 2014
7 febroary: andron'ny fifandranitana sy ny fifanirikiriana
2014-02-07 @ 21:26 in Politika
Tsy misy mahalala izay am-po tsy miloaka, fa na izany aza dia tsapa ihany fa ny fo no tena miasa rehefa miresaka ity datin'andro politika ity nefa odiana tsy fantatra mihitsy ny datin'andro iray mifanakaiky aminy dia ny 26 janoary satria mivandravandra be hoe iza no tompon'andraikitra tamin'ny fandrobana sy ny fandorana toerana maro teto Antananarivo sy nanerana an'i Madagasikara. Miharihary ihany koa anefa fa ataon'i Andry Rajoelina ho fitaovana politika hitadiavan-tseza ilay datin'andro... ary ny sary ahitana ny loko nandravaka ny kianja mitafon'i Mahamasina no mandravaka izay zavatra miharihary izay. Fahatsiarovana ireo nodimandry notifirin'izay mbola nampanontany tena hoe avy aiza tokoa ve no natao sa fanandratana olona iray? Fotoam-pivavahana ve no natao sa famendrofendroana sy fanamelohana tsy mitsahatra an'i Marc Ravalomanana?
Na dia miezaka ny handresy lahatra aza ny ankamaroan'ny haino aman-jery eto Madagasikara fa manamarika andro lehibe teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny andron'ny 7 febroary dia tsy resy lahatra amin'izany kosa ny ankamaroan'ny olona, ary tafiditra amin'izany ny tenako, fa famitaham-bahoaka hanaovana sorona azy hahazoan'ny sasany ny fahefana sy hanalana baraka izay nitondra ny firenena iny andro iny. Na impiry haverimberina amin'ny haino aman-jery isan-taona aza ny 7 febroary sy ny fanamelohana an'i Marc Ravalomanana natombok'i Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny antso an-telefonina an-dranomasom-boay dia tsy hitondra na inona na inona ho amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fihavanan'ny Malagasy na oviana na oviana ny fankalazana azy ity fa fisaraham-bazana aza no haterany.
Nazava ny tanjona nanaovana ny 7 febroary: hanaovana sorona ny vahoaka ka lohalaharana amin'izany ny PM na Premier Martyr Monja Roindefo saingy soa fa tsy maty ranamana iray io ka afaka nijoro ho vavolombelona taty aoriana fa notadiavina mihitsy ny hahafaty azy tamin'io andro io. Antony nentina handresena lahatra ny olona hataon'ireo nitady ny fahefana ny sorona amin'izany ny hoe halaina hatao biraon'ny praiminisitra ilay lapa satria hoe fananan'ny Kaominina izy io, hoy i Andry Rajoelina. Fanontaniana tampoka: an'ny Kaominina tokoa ve ilay lapa amin'izao fotoana izao? Aza mba manaiky fitapitahana ho'aho rey olona fa voin-tenanareo ny nanaiky ny hangaron-dapa... Teny mivantana mankarary izany soratako farany izany ka izay no amerimberenako hoe raha mbola hankalazaina fatratra toy izao ity andro iray ity dia ho amin'ny fifandranitana sy ny fifanirikiriana eo amin'ny tsy mitovy hevitra amin'ity raharaha ity no tanjona nanaovana azy!
Jentilisa 7 febroary 2014